Bogga ugu weyn Faallooyinka Maqalka ah ee 2022: Ma mudan tahay | Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka Maqalka
Adigoo ah qof jecel buugga raadinta madal buugaagta maqalka ah, laga yaabee inaadan haysan waqti aad ku aqriso buugaag (buugaag jireed) ama ebooks, Audible waa mid ka mid ah aaladaha ugu fiican ee aad ka heli karto.
Audible waa goob aad ka iibsan karto, kala soo degsan karto, kuna dhageysan karto buugaag maqal ah oo aad dooratay aalad kasta. Waxay abuuraan nuxur asal ah oo aan laga heli karin meelo kale.
Ma yaabban tahay haddii ay runtii mudan tahay isku dayga?
Jawaabtu waa haa. Madalku wuxuu mudan yahay in lagu tijaabiyo dhammaan astaamaha uu leeyahay iyo faa'iidooyinka aad heli doonto ka dib markaad iska qorto adeegga; Uma maleynayo inaad ka qoomameyn doonto.
Markaa, nagu soo biir markaan ku tusayno sida maqalku u shaqeeyo, astaamaha, faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka maqalka, iyo haddii maqalku u qalmo Qiimeyntayada Maqalka ee Amazon.
Waa Maxay Maqalka?
Sida laga soo xigtay Wikipedia, Audible waa buug maqal ah oo internetka ah iyo madal podcast ah oo ay leedahay Amazon.com Inc. oo la aasaasay 1995, madalkani waa soosaaraha iyo tafaariiqda ugu weyn ee Mareykanka.
Adeeggu wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala inay iibsadaan oo sii daayaan buugaag maqal ah iyo qaabab kale oo ka kooban ereyga hadalka.
Sidoo kale, nuxurkaan waxaa lagu iibsan karaa si gaar ah ama hoosta moodel-ka-diiwaangelinta halkaas oo adeegsaduhu ku helo "dhibco" oo lagu bixin karo waxyaabaha ku jira bil kasta, oo uu heli karo maktabad-ku-dalbasho la dalbaday oo ka kooban.
Sidee Audible u shaqeeyaa?
Maqalku wuxuu ku shaqeeyaa adiga oo u saxiixaya Audible xubinnimada caadiga ah, waxaad heleysaa hal buug oo maqal ah bil kasta xubin ahaan.
Waxaad haysataa ikhtiyaar aad ku kala dooran karto qorshayaasha xubinnimada ee kala duwan, qof kasta oo aad dooratana wuxuu go'aamin doonaa inta Audible "credits" ee aad hesho bil kasta, taas oo lagu beddeli karo buugaag maqal ah oo ku saabsan adeegga.
Sidoo kale, waxaad dhageysan kartaa dhammaan Podcast-yada asalka ah ee La maqli karo oo leh qulqulka aan xadidneyn, waxaana sidoo kale jira dhowr dalabyo iyo heshiisyo gaar ah inta lagu jiro bisha oo dhan kuwaas oo ay ku jiraan "Heshiiska Maalinlaha ah" oo bixiya cinwaan ka duwan ilaa 80% dhimis maalin kasta.
Faallooyinka Maqalka: Maxay Yihiin Astaamaha Xubinnimada Maqalka?
Adiga oo xubin ka ah Maqalka, waxaad ku dhex raadin kartaa Audible Originals qayb ahaan iyo talooyinka si fudud. Sidoo kale, halkan waxaa ah astaamaha xubinnimada ee muhiimka ah ee hoos ku taxan.
Waxaad marin u leedahay Heshiisyada Maqalka Maalinlaha ah, oo leh buugaag maqal ah oo lagu heli karo ugu yaraan $ 2.95
Weligaa waad haysan kartaa maktabaddaada cinwaanada, xitaa haddii aad tirtirto xubinnimadaada
30% dhimis cinwaano dheeri ah oo aad ku iibsato xubin ahaan
App Audible ayaa ilaalinaysa booskaaga, xitaa markaad beddesho aaladaha
Waxaad sidoo kale ka heli kartaa Audible dhammaan aaladahaaga oo ay ku jiraan aaladaha karti u leh Alexa, Amazon Kindle, ciyaartoy maqal ah, iyo af-hayeen kasta oo Bluetooth ah.
Had iyo jeer xayeysiis la'aan.
Audible wuxuu kaloo bixiyaa boqolaal cinwaan oo lagu sheekeeyay Isbaanish, oo loo yaqaan Audible Latino.
Waxaad ka heli doontaa sheekooyin wargeysyada hormuudka ka ah dhammaan dalka oo dhan. Ku biir hal ama in ka badan oo aan lahayn kharash dheeraad ah xubnaha.
Sidoo kale, Audible waxay bixisaa casharo hagitaan maqal ah oo ku saabsan ka fiirsashada iyo jirdhiska.
Faallooyinka Maqalka: Maxay yihiin Waxyaabaha aad U Baahan Tahay Inaad Gasho Maqalka?
Waxaad ka heli kartaa Audible onlayn iyo xubin ahaan, waad soo dejisan kartaa barnaamijka oo aad iska qori kartaa akoonnadaada Amazon adiga oo adeegsanaya aaladaha ku habboon sida (kiniinnada, taleefannada gacanta, kombiyuutarada, Alexa) iyo nidaamyada (iOS, Android, Windows).
Haddii aadan lahayn koonto amazon, waxaad u baahan doontaa inaad abuurto mid, ka dibna iska qor qorshaha xubinnimada Maqalka ee aad jeceshahay inaad gasho.
Sideen Isku Qoraa?
Habka ugu fudud ee lagu qoro waa iyada oo loo marayo audible.com. Waxaad ku bilaabi kartaa a Maxkamad bilaash ah oo 30 ah. waxaad ku gali doontaa koonto Amazon jirta ama waxaad abuuri doontaa koonto Amazon ah. Markaad soo gasho, dhibcahaaga la heli karo waxaa lagu qori doonaa geeska midig ee kore
Faallooyinka Maqalka: Intee In le'eg Ayey Ahayd Qiimaha Maqalka?
Kharashku wuxuu ku xiran yahay qorshaha aad rabto. Halkan waxaa ah liiska kharashyada la maqli karo.
Dahabka Billaha ah: 1 deyn bishiiba $ 14.95 deyn kasta
Platinum -ka Billaha ah: 2 dhibco bishiiba $ 11.48 deyn kasta ama $ 22.95 bishii
Dakhliga Sannadlaha ah ee Dahabka: 12 dhibco sanadkiiba $ 9.96 halkii deyn sanadkiiba iyo $ 12.46 deyn kasta wixii ka dambeeya ama $ 119.50 sanadka koowaad iyo $ 149.50 sanad kasta kadib
Sannadlaha Platinum: 24 dhibco sanadkiiba $ 9.57 halkii deyn ama $ 229.50 sanadkii.
Intaa waxaa dheer, dhammaan xubnaha waxay helayaan 30% dheeraad ah cinwaano kasta oo la iibsado dhibco la'aan, laba Asal oo Maqal ah oo bilaash ah bil kasta, waxayna beddeli karaan buugaag kasta oo maqal ah oo aadan jeclayn sannad gudihii iibsiga.
Faallooyinka Maqalka: Pro Iyo Qasaarooyinka La Maqli Karo
Kaliya ogow in noloshu aysan wada ahayn macaan iyo ubax. Laakiin dadaal dheeri ah si loo helo akhrinta tayada ugu wanaagsan ee loo heli karo qof kasta oo wax akhrin kara oo dhagaysan kara, Audible Audible ayaa ku dhow.
Marka, halkan waxaa ah faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka maqalka Amazon.
Xulashada buugga maqalka ee ugu weyn tartamayaasha Dhibcaha xubinnimada aan la adeegsan waxay dhacayaan hal sano kadib
Xulashada weyn ee magacyada asalka ah Dhibcaha aan la isticmaalin way baaba'aan haddii aad tirtirto xubinnimada ka hor intaadan isticmaalin
Dhammaan buugaagta la iibsaday adigaa iska leh si aad weligaa u haysato, xataa haddii aad tirtirto xubinnimada Buugaag maqalku waa ka qaalisanaan karaa nuqulka adag ama ebook.
Barnaamij la maqli karo wuxuu la mid yahay barnaamijyada kale ee la maqli karo iyo iibsiyada (oo ay ku jiraan iTunes iyo Google Reads) Magacyada Maqalka ee Amazon ayaa marmar ka qaalisan amazon.com ama goobaha buuga tartamayaasha.
Calaamadeyn aan xuduud lahayn (meesha aad hadda ku sugan tahay, ha ahaato mid maqal ama muuqaal ah, had iyo jeer waa la keydiyaa oo waa la iswaafajiyaa) Haddii aad akhrido wax ka badan inta loo qoondeeyay dhibcaha bil kasta, qiimaha buug kasta waa la isku dari karaa
Xulasho cajiib ah oo ka kooban bilaash Isticmaalayaasha iPhone hadda ma awoodaan inay si toos ah u iibsadaan buugaagta iyagoo adeegsanaya barnaamijka Audible sababtoo ah xannibaadaha qandaraaska, markaa waa inaad ku soo dejisaa kombiyuutar.
Maktabadda Qoyska ee Amazon, oo kuu oggolaaneysa inaad la wadaagto buugaag maqal ah aaladaha xubin kale oo qoyskaaga ah Buugaagta lama baahin karo, markaa soo dejinta aaladdaada moobaylka waxay adeegsan doontaa kaydinta.
Ku -xirnaanta afhayeenka Bluetooth,
sheekooyin caan ah, jilayaal, iyo jilayaal
Sicir -dhimista xubinta si aad u iibsato buugaag dheeraad ah
Noocyo la soo gaabiyey oo ah buugag badan oo maqal ah, oo lagu bixiyo qiimo jaban
Lacag celin ayaa la heli karaa 1 sano gudahood marka buug la iibsado
Awoodda inaad xubinnimadaada dib u dhigto muddo cayiman.
Sidoo kale, awoodda lagu beddeli karo xawaaraha dhageysiga (dedeji ama hoos u dhig).
Amazon Faallooyinka la maqli karo: Ma mudan tahay?
Bixinta khidmad bille ah si aad u hesho xubinnimada Maqalka waa u qalantaa haddii aad dhegeysato maqalka oo socda oo aad jeceshahay akhriska.
Maktabadda weyn ee adeegga, qiime jaban, iyo dhammaan faa'iidooyinka dheeraadka ah ee lagu xusay maqaalkan ayaa runtii ka dhigaysa mid u qalma qof kasta oo jecel buugga oo doonaya inuu bilaabo bilawga buugaagta maqalka. adoo eegaya dhammaan astaamaha/faa'iidooyinka, runtii way adag tahay in la iska caabbiyo qiimaha saafiga ah ee dalabyada Maqalka ah.
Maqalku wuxuu kaloo noqon karaa habka aad ugu jeceshahay inaad waqtigaaga uga faa'iidaysato intaad safrayso, jimicsiga samaynayso, iyo safarkaba.
Intaa waxaa dheer, tijaabada bilaashka ah ee 30-ka maalmood ah oo aad hesho buug, waxaad heli doontaa waqti badan si aad u hesho jawaabtaada haddii ay runtii u qalanto.
Iyada oo la maqli karo, ma jiri doonto marmarsiiyo aan loo akhrin buuggaas aad mar walba doonaysay inaad akhrido.
Horumarinta hab -dhaqanka wanaagsan
Faallooyinka Bookscouter 2022: Sida ay u shaqayso | Ma Xalaalbaa mise waa Fadeexad
Faallooyinka Casting360: Waa maxay Isticmaalayaashu waxay ka yiraahdaan shubista360
Qaadista 360 oo ah gaadhi khadka tooska ah ee ugu sareeya ee isku midka ah agaasimayaasha jilitaanka ee karti leh, ayaa sanadihii la soo dhaafay ku mashquulsanaa…
Barnaamijka Xisaabaadka MYOB: Dib u Eegis Buuxda | Sida ay u shaqayso
Ganacsiyada yaryar waxay leeyihiin caqabad joogta ah oo habaynta buugaagtooda. Daciifnimadan qaab dhismeedkooda ah ayaa ka mas’uul ah…
Dib -u -eegista Nasiibka leh 2021: Runtii ma ku guuleysan karaa lacag caddaan ah?
Miyaad aragtay dib -u -eegisyadii ugu dambeeyay ee barnaamijka Lucktastic? Haddii aadan haysan, xitaa ha dhibin. Isku dhafan…